လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုသာအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဆောင်တတ်၏, သင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဓတေား ။ တစ်ဦးသင့်လျော်သောအကာအကွယ်အေးဂျင့်ကိုရွေးချယ်ပါဆရာဝန်တစ်ဦးကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံးစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ပါကွန်ဒုံး, မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဒါပေမယ့်လည်းအားဖြင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုကနေမသာတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။
မိန်းမတို့အဘို့တစ်ဦးကကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကာလအတွင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာမအာမခံချက် 95% ဖြစ်ပါသည်, ဓတေား၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကိုစေးမှမတည့်လူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာက polyurethane များ၏ထုတ်လုပ်မှု, များအတွက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ ပြင်ပမှ, အမျိုးသမီးကွန်ဒုံးယောက်ျားဆင်တူဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပိုရှည်ဖြစ်ပြီး, ကဆောင်းပါး၏တံခါးပိတ်အဆုံးမှာတစ်ဦးအပိုဆောင်းလက်စွပ်ရှိပါတယ်။
မိန်းမတို့အဘို့ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်လွယ်ကူခြင်းမှစွပ်စွဲနိုင်သည့်မှအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်အရေအတွက်, ကြိုတင်မဲအတွက်တစ်ဦးတားဆေးပေါ်တွင်တင်နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အလွန်ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုကိုပေးခွင့်ပြုပါရန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးကွန်ဒုံးနှင့်အတူ STDs ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒီဂရီတိုးပွါးသောချွန်ထက်ယိုယွင်းစိုက်ထူ, အတူက "ဆုံးရှုံး" ၏အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်ရေမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အပိုဆောင်းလက်စွပ်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏အပြင်ဘက်မှလျှောက်ထားသည့် spermicides, အသုံးပြု. မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒီဂရီတိုးမြှင့်။
ဒီတားဆေး၏အားနည်းချက်များမှားယွင်းတဲ့၏နိဒါန်းမှအဓိကအားဖြင့်ဆက်စပ်နေပါတယ် - ဤအမှု၌, အချို့အဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျအမျိုးသမီးကွန်ဒုံးဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လို - ဤကိစ်စတှငျကမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မကြာခဏဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးအဆင်ပြေအနေအထားလဲလျောင်းဒါမှမဟုတ်ကုလားထိုင်ပေါ်တွင်သင်၏ခြေချပြီး ယူ. ,
ဆောင်းပါး spermicide ၏အပြင်ဘက်ခြမ်းအပေါ် Apply;
အတွင်းလက်စွပ်၏ကွန်ဒုံးတက်နှင့်တစ်ဦး elongated အဘဲဥပုံ၏ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယူနိုင်အောင်ချုံ့;
သားအိမ်ခေါင်းရန်သင့်လက်ချောင်းတွေနဲ့ထုတ်ကုန်တွန်းများနှင့်ဖြန့်ချိ - အတွင်းလက်စွပ်သူ့ဟာသူလက်ျာအနေအထားကိုယူရမည်,
ပြင်ပနှင့် ပတ်သက်.3စင်တီမီတာထုတ်ကုန်၏ဖြစ်နေဆဲကြောင်းသေချာပါစေ။
လိင်ဆက်ဆံမှုဟာမိတ်ဖက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကအများနှင့်ယောနိ၏နံရံအကြားကွန်ဒုံးမဟုတျဘဲအတွင်းပိုင်းထဲသို့ဝင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အများဆုံးနှစ်သိမ့်အဘို့, လူချောဆီကိုသုံးနိုင်တယ်။ ကွာဟချက်များဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သောထိုအရပ်၌ဆောင်းပါးများအားကြီးသောပွတ်တိုက်များအကြား - သငျအမြိုးသမီးမြားအဘို့အကွန်ဒုံးကိုသုံးလျှင်ပိုမိုနှင့်လူတို့၏ဝတ်ဆင်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ အမျိုးသမီးကွန်ဒုံး extract ဖို့အသုံးပြုလိင်အင်္ဂါသို့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ရှောင်ရှားရန်ဂရုတစိုက်ဖြစ်သင့်သည်။
နောက်ဆုံးတီထွင်မှုတစ်ခုမှာအမျိုးသမီးအရည်များမှာ ကွန်ဒုံး ။ လိင်အင်္ဂါအတွင်းလျှောက်ထားကြသောအခါအရာ Nano-ငွေအမှုန်, င်ဒီအထူးမှုန်ရေမွှားမဆိုရောဂါကူးစက်မှု၏ကိုယ်ဝန်နှင့်ရောဂါကူးစက်များ၏ဖြစ်ပျက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးတဲ့အကာအကွယ်အမြှေးပါးဖြစ်ပေါ်လာသော။
အသုံးပြုမှု၏နည်းလမ်းနှင့်အညီအမျိုးသမီးကွန်ဒုံးအလားတူငွေ, ပလပ်စတစ်, လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်ရော်ဘာကနေဖန်ဆင်းတော်ထားတဲ့ဦးထုပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဓတေား၏ဤနည်းလမ်းကိုဆရာဝန်တစ်ဦးကြောင့်အရှေးခယျြသငျ့သညျ သာသူကသင့်လျော်သောအရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဦးထုပ်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒီဂရီတိုးမြှင့်ဖို့သုက်ပိုးထိုးဖောက်မအောကျလုံလောက်စွာသားအိမ်ခေါင်းတင်းကျပ်စွာကျော်ကိုက်ညီလည်းဓာတု (spermicides), ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေထုပ်ကတစ်ဦးချင်းစီလိင်လုပ်ရပ်မတိုင်မီပေါ်တွင်တင်ရန်မလိုအပ်သလဲ, တစ်ပါတ်ထက်ပိုဝတ်ဆင်နိုင်နိုင်အောင်။
ဟုတ်ပါတယ်, ယနေ့မလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းဖြစ်ကြောင်းဟော်မုန်းဆေးပြားများ၏အလွန်လူကြိုက်များအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်များကအမြဲတမ်းတဦးတည်းလမ်းအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးကွန်ဒုံးများနှင့်ဓတေား၏အခြားစက်မှုနည်းလမ်းများ, ဟော်မုန်းဆေးပြားဖို့အကောင်းဆုံးအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး nymphomaniac နှင့်မည်သို့ကြောင့်အသိအမှတ်မပြုဖို့ကားအဘယ်သူနည်း
တစ်လှောင်အိမ် 2014 ခုနှစ်ဘောင်းဘီ
ဗြိတိန်အဆိုတော် Rita Ora ပရိသတ်ကိုတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မတ်မတ်အံ့အားသင့်ထားပါတယ်
ဟာရှအဆီကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?